Яндекс.Метро အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（41.8MB） ယခင်ဗားရှင်း
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ Metro သို့ သွား. ခရီးသွားချိန်ကိုလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်အတူလေ့လာပါ။ လျှောက်လွှာသည်အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်ဆောက်လိမ့်မည်, မည်သည့်ကားကိုတင်ရပါမည်သည့်ကားကိုမဆိုအချက်ပြပါလိမ့်မည်။ မြေပုံပေါ်ရှိဘူတာရုံမှဆိုင်များမှထွက်ပေါက်များကိုပြသပြီးထပ်ခါထပ်ခါသတိပေးလိမ့်မည်။ နောက်ဆက်တွဲသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမြို့ကြီးများကွဲပြားခြားနားသောမြို့ကြီးများနှင့်မက်ထရိုအစီအစဉ်များ 30 ကျော်ရှိသည်။
• Metro Scheme သည်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူ Metro Scheme သည်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ဘူတာနှင့်လေဆိပ်သို့မည်သို့သွားရမည်ကိုအစီအစဉ်ပြသည်။ အကယ်. သင်အစီအစဉ်ကိုတိုးမြှင့်ပါကပိုမိုသိရှိလိုပါကပိုမိုသောသတင်းအချက်အလက်များပြလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဘူတာများအကြားအသွင်ကူးပြောင်းမှု။ •အဆင်ပြေသောငွေလွှဲခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများနှင့်လှည်း
လွှဲပြောင်း၏နှင့်ဘူတာရုံပြန်လည်ပြုပြင်။ လျှောက်လွှာကမည်သည့်လေ့ကျင့်မှုကကားကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာရရန်နှင့်အကူးအပြောင်းအတွက်အချိန်ပိုမဖြုန်းတီးပါက ပို. ကောင်းသည်ဟုသင့်အားပြောပြလိမ့်မည်။
ဘူတာတစ်ခုစီတွင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များရှိသည်။ မည်သည့်ရလဒ်များနှင့်မည်သည့်လမ်းများပေါ်တွင်သူတို့0တ်ဆင်ခြင်း, အလုပ်ချိန်နှင့်သတိပေးချက်များ။ လျှောက်လွှာသည်အငှားယာဉ်ကိုမှန်ကန်သော0င်ရောက်မှုသို့ခေါ်ဆိုရန်ကူညီလိမ့်မည်။
• Moscow Trokika နှင့် arrowing သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဒ်ပြား၏ချိန်ခွင်လျှာနှင့်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်သည်။
TalkBack Mode ကိုလူများသည်ရူပါရုံပြ problems နာများဖြင့်လူတို့အား အသုံးပြု. TalkBack Mode ကို Added ။
•နောက်ဆက်တွဲ•ကမ္ဘာပေါ်ရှိမြို့ကြီးများကွဲပြားခြားနားသောမြို့ကြီးများမှ Metro Schremes 30 ကျော်။
ရုရှား - Volagaterinburg , ကာဇန်, မော်စကို, Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, samara, စိန့် Petersburg, စိန့် - အာမေးနီးယား: arrena: arrena: arrena: arrenia: arrena: Belarus ။
- ဘူလ်ဂေးရီးယား: ဆိုဖီယာ။
Budgia: Milan: Milan: Milan: Atomy: Kazakhstan: Kazakhstan: Alimy ။ - ယူအေအီး - ဒူဘိုင်း။
Poland: Warsaw: Polia: Bucharest ။
San Francisco ။
Uzbekent: Tashkent ။
ယူကရိန်း - Dnipro, Kiev, Kharkov ။
Finlinki: Czech Practic ။
ဘာအသစ်လဲ Яндекс.Метро 3.6.4
Урок 15. Смартфон от А до Я. Приложение Яндекс Метро. Оптимальный маршрут в метро
Смартфон от А до Я
Яндекс.Метро - обзор iOS приложения
Как работает NFC и Яндекс.Метро